Home News C/weli Gaas Oo Wadnaha Farta Ku Haya Xilli Ay Soodhawdahay Doorashada Puntaland
C/weli Gaas Oo Wadnaha Farta Ku Haya Xilli Ay Soodhawdahay Doorashada Puntaland
Sida muuqata waxaa soo dhaw Doorashada Golaha Wakiilada iyo midka Hogaanka Sare Puntland oo Marxlad kale geli doonta.
Doorashadaasi waxaa isku biro tumanaya Qawaamuur Aqoonyahano iyo Siyaasiyiin Sifooyino kale kusoo caan baxay.
Madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas ayaa xilli shaqeedkiisa uu gabaabsi yahay taasi oo keentay in ololaha uu hadda sii bilowday.
Murashaxiinta qaar waxay sheegeen inay doonayaan sidii C/weli Gaas uusan kusoo laaban laheyn ay xitaa goobta doorashada ay ku midoobi doonaan.
Waxa taasi kaaga marag ah in xod xodasho ay hadda socoto oo shan bil qiyaas ahaan doorashada ka dhiman tahay.
Gaas qudhiisa ma jiifo oo waa uu diyaar garoobayaa,waxaana badi dadka Reer Puntland ay yihiin kuwo mar kasta ku fekiraya sidii ay ku heli lahaayeen hogaan wanaagsan.
Cali Xaaji Warsame oo ka mid ah Aqoonyahanka Puntland waxa uu sheegay in Reer Puntland Fursad u heystaan iminka oo qof Xaqa iyo Xalaasha kala yaqaan ay soo doortaan.
Taasi waxay muujin kartaa in Gaas uu laaluush qaate ahaa sida siyaasiyiinta warkooda laga dhadhansanayo balse taasi dad ka fekir duwan baa jira oo Ina Gaas usacbinaya.
Waxaa Qurba joogta Puntland kasoo jeeda ay aaminsan yihiin badankood uu C/weli Gaas uhorseeday Deegaanka Hormar iyo Dib udhis ballaaran afar sano uu soo hogaaminayey.
Puntland inkastoo lagu dhaliilo is hortaaga Dawlada Dhexe hadana waayahaan waa saaxiib dawlada oo wax badan ayey is dhaafsadaan Xoog iyo Xeelad intuba.
Previous articleWasiirka Cusub Ee Wasaarada Waxbarashada Oo Maanta Booqday Xarumaha Jaamacada Ummadda Isagoo Hadal Aan La Fileyn Ka Dhawaajiyay
Next articleWasiir Xagaa “Waxaan aad uga baqaynaa in Safarka MW Farmaajo noqdo mid guuldaro ku dhamaado”
R/wasaare Xassan Cali Kheeyre oo Markii 4-aad ka Baaqday Safar uu...
8da Febrayo 2017: Hal Sano oo Hoog ah soo Aragnaye: Ma...